Ciyaaryahanka Buffon oo loogu baaqay in uu ka qeybgalo filmaanta Galmada - iftineducation.com
Ciyaaryahanka Buffon oo loogu baaqay in uu ka qeybgalo filmaanta Galmada
iftineducation.com – Jillaaga sameeya aflaanta dadka qaangaarka/ Filimada Galmoodka ah, ayaa gool hayaha naadiga Juventus iyo xulka dalka Talyaaniga ugu baaqey in uu ku soo biiro shaqada ay iyagu qabtaan, ka dib markii Gianluigi Buffon ay xaaskiisa ku ammaantey dhinaca howsha sariirta.
Kubad celiyaha lambarka koowaad eeItaly, ayaa xiddiga weyn ee dhinaca aflaanta dadka waaweyn daawadaan/Galmada sameeya ugu yeerey in uu ku soo biiro Shaqada ay hayaan, wax yar ka dib markii xaaska Buffon, ay si weyn ugu amaantey seygeeda xirfadaha uu adeegsado marka sariirta la joogo.
Buffon, oo 34 jir ah, ayaa xaaskiisa Alena waxay wargeyska arrimaha haweenka ka faalooda ee dalka Talyaaniga ka soo baxa ee la yiraahdo Verrisimo, u sheegtey in ninkeeda dhinaca Gogosha/Galmoodka uu xitaa kaga wanagsan yahay jilaaga reer Italy ee ku caan baxay dhinaca iyo sameynta aflaanta galmada ee la yiraahdo Rocco Siffredi.
Laakiin Siffredi, ayaa durba ka jawaabey faalada ay bixisay xaaska Buffon, waxana wareysi uu siiyay wargeyska Tuttosport, uu ku sheegey inuu u xiiso qabo in uu arko sida uu howsha u qabto Buffon.
” Isaga [Buffon] ayaa xita igaga wanagsanaan karo dhinaca sameynta howsha galmada, laakiin waxan rabaa inaan ku arko kaamerada horteeda, Buffon wali waa ilmo aniga ayaana la ila bar bardhigey, waxaan u soo jeedinayaa marka uu cayaaraha ka farisito in uu anniga ii shaqeeyo, waxaan u baahanahay rag dhab ah” ayuu yiri Siffredi.
Buffon, walikamahadlin hadalka ka yimid filim sameeyaha dadka qaan gaarka ah/ Galmada.
Mucjisooyinka Aduunka : Wiil yar oo 7 sano jir ah ayaa dunida kaga yaabsadey habka jir dhiskiisa iyo weliba waxyaalaha uu sameynayo(Daawo)
Daawo Muuqaal Ahaan Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Masar oo gudaha baarlamaanka addin ku dhuftay,markii la gaaray salaaddii casar